Torolàlanao amin'ny famoronana fandaharam-potoana fandefasana azo itokisana amin'ny YouTube hampitomboana ny mpijery - YTpals
Misy lahatsoratra sy bilaogy tsy tambo isaina izay manoro hevitra ny mpamorona votoaty YouTube handefa horonan-tsary tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fifikitra amin'ny fandaharam-potoana fandefasana. Na izany aza, tsy dia misy fampahalalana firy momba ny fomba ahafahan'ny mpamorona votoaty mamorona fandaharam-pamoahana hahombiazana. Raha mbola vaovao amin'ny sehatra YouTube ianao dia vakio. Amin'ity lahatsoratra ity, hizara aminao ny toro-hevitra ambony rehetra azonao ampiharina amin'ny fandaharam-potoanan'ny votoaty YouTube izay manome valiny matanjaka.
Ampiasao ny endri-javatra matetika fandefasana fandefasana YouTube
Raha tsy te hamorona fandaharam-potoana fandefasana amin'ny antsipiriany ianao dia azonao atao ny mampiasa ny endri-javatra matetika amin'ny fandefasana hafatra YouTube izay omen'ny sehatra ho an'ny mpamorona votoaty. Azonao atao ny manitsy ny toe-javatra amin'ny fampiasana an'io endri-javatra io rehefa mampakatra horonantsary manokana havoaka ianao. Rehefa mampiakatra ny horonan-tsarinao ianao dia tsy maintsy mampiditra antsipirian-javatra isan-karazany mba hamaranana ny fametrahana ilay horonan-tsary ho an'ny famoahana. Amin'io fotoana io no hahitanao ny tabilao 'Visibility', izay ahafahanao mandamina ny fotoana hamoahana ny horonan-tsaryo.
Mamorona fandaharam-potoana fandefasana izay mety aminao
Mpamorona votoaty maro ao amin'ny YouTube izao no mamoaka votoaty isan'andro mba hanamafisana ny fijeriny sy ny isan'ny mpanjifa. Na izany aza, satria ny olon-drehetra dia mamoaka votoaty isan'andro dia tsy midika izany fa tokony ho toy izany koa ianao. Mazava ho azy, raha afaka mitazona kalitao avo lenta ianao amin'ny fampiakarana tsy tapaka, mandehana avy hatrany. Na izany aza, raha mahazo aina kokoa ianao mamoaka horonan-tsary 1 na 2 isan-kerinandro, dia izay no tokony hifikiranao. Tsarovy, aza manao sorona ny kalitao ho an'ny habe – mety hanome vokatra ho anao ao anatin'ny fotoana fohy izany, fa ho very ny mpijery ianao amin'ny farany.
Araraoty ny YouTube Studio
YouTube Studio dia endri-javatra ahafahan'ny mpamorona votoaty hitantana ny atiny amin'ny fomba milamina sy tsy misy olana. Ankoatra ny fanomezana endri-javatra fitantanana votoaty marobe, YouTube Studio dia manome ny mpamorona votoaty fomba fijery momba ny fampisehoana ny lahatsariny. Ireo hevi-baovao ireo dia manolotra antsipiriany tena ilaina, ao anatin'izany ny fotoana ijerena ny horonan-tsaryo indrindra. Tena ilaina ny fanaraha-maso an'io fampahalalana io, satria hanome anao hevitra tsara momba ny fotoana tsara indrindra handefasana ao amin'ny YouTube amin'ny 2022 izany.
Tanjona ny tsy fitovian-kevitra ambonin'ny zavatra rehetra
Raha toa ianao ka karazana YouTuber izay tsy afaka mamoaka vidéo iray isan-kerinandro ihany, aza manahy momba ny isan'ny horonan-tsary navoakanao. Fa kosa, manoro hevitra izahay hifantoka amin'ny tsy fitoviana, izay ahafahan'ny mpijery hitana ny zavatra antenainao amin'ny tena izy. Ohatra, raha mandefa horonan-tsary isaky ny alatsinainy ianao dia tokony ho azo antoka fa na inona na inona mety hitranga dia tsy hisy Alatsinainy handalo raha tsy ampidirinao video. Izany koa dia hanampy anao hametraka tanjona tena izy ho an'ny tenanao - tanjona azonao tratrarina sy refesina.
Miezaha mieritreritra kely momba ny YouTube Shorts sy YouTube Live ihany koa
Indray mandeha, YouTube ihany no namela ireo mpamorona votoaty handefa karazana horonan-tsary iray, saingy efa ela ireo andro ireo. Amin'izao fotoana izao, YouTube dia manolotra karazana atiny isan-karazany, ao anatin'izany ny Shorts sy Live. Nipoitra ho mpifaninana amin'ny TikTok sy Instagram Reels ny YouTube Shorts, ary mamela ireo mpamorona votoaty hanatsara ny atolony. YouTube Live dia fomba tsara ho an'ny mpamorona votoaty hanakaiky kokoa ny mpankafy azy. Noho izany, rehefa mamorona fandaharam-potoana fandefasana hafatra dia mamorona fandaharam-potoana misaraka ho an'ny YouTube Shorts sy YouTube Live.
Raha tianao fomba fijery YouTube maimaim-poana mba hahatonga ny fantsonao ho amin'ny fanombohana manidina, maninona raha mieritreritra ny hampiasa tsara indrindra ny serivisy toy ny YTpals. Ankoatra ny fijerena maimaim-poana sy ny tia, YTpals dia mamela ny mpamorona votoaty mividy mpanjifa YouTube.
Torolàlanao amin'ny famoronana fandaharam-potoana fandefasana azo itokisana amin'ny YouTube hampitomboana ny mpijery avy amin'i YTpals Writers, 24 Janoary 2022
Hetsika Marketing YouTube tokony horaisina amin'ny 2021
Ny taona 2020 dia nanjary tsy nisy ohatra izany ary sarotra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'ny orinasa. Niteraka korontana nanerana an'izao tontolo izao ny valanaretina COVID-19, nanosika ireo orinasa hanongana ny vavam-baravaran'izy ireo….
Hatramin'ny nanombohany ny taona 2005, ny YouTube dia nanolotra ireo mpivarotra maoderina amin'ny fotoana maro ahazoana vola sy hampiroborobo ny marika alohan'ny toeran'ireo mpihaino marobe. Io no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa aorian'ny orinasany Google,…
Inona no mahatonga ny horonan-tsarinao ho avo kokoa amin'ny valin'ny fikarohana YouTube?
Ianao ve mitady fomba afaka manampy anao hanana toerana ambony kokoa amin'ny valin'ny Fikarohana YouTube? Ny algorithm YouTube dia mety ho sarotra amin'ny fitetezana, fa ny fahafantarana ny tena fiantraikan'ny laharanao dia afaka manampy anao. Target…